I-PPC ngokuchasene ne-SEO okanye i-Spy vs Spy
NgoLwesibini, Februwari 22, 2011 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 UChris Bross
Ngaba ukhona umntu okhumbulayo i-Spy yakudala ne-Spy comics? Izinto ezihlekisayo! Uhlola ngalunye uhlala uceba ukugqitha omnye. Kukho iingcinga zeshishini ezifanayo namhlanje xa iinkampani zijonga isicwangciso sentengiso seinjini yokukhangela. Amashishini athabatha amacala kwangoko: Hlawula ngokokuCofa (PPC) ngokuchasene noPhando lweOrganic (SEO).
Injongo yesicwangciso sokuthengisa sokukhangela kukuvelisa isikhokelo okanye ukuthengisa. I-PPC kunye ne-SEO nganye inezibonelelo zabo kwaye banokuxhobiswa ukufikelela kwi-ROI enkulu.
Ukuhambelana neenkqubo ze-PPC kunye ne-SEO kunokuba nefuthe elibalulekileyo:
Ukonyuka phantse kwe-12% kwiQondo lokuGuqula elidityanisiweyo xa iiNtlawulo eziHlawulweyo kunye neOrganic zikhona ngaxeshanye
Ukonyuka kweenzuzo ezilindelekileyo, eziphakathi kwe-4.5% kunye ne-6.2% xa zombini amakhonkco e-SEO kunye ne-PPC evela ngaxeshanye xa kuthelekiswa nokungabikho kwenye okanye enye
umthombo: IYang kunye neGhose, NYU, 2009
I-PPC kunye ne-SEO-Unomhlobo kum!
Ulawulo lwe-SERP -Ukusebenzisa zombini i-PPC kunye ne-SEO ngokudibeneyo kuya kufumana isabelo esikhulu kwiPhepha leZiphumo zeNjini yokuKhangela (i-SERP). Indawo ethe kratya ekuhlalwa kuyo yishishini elinye, kuthetha okuncinci kubakhuphiswano bayo. Kwakhona kuya kubakho ithuba elikhulu lokwandisa amaxabiso akho onke okucofa.
Ukuqonda iziteshi zomnqamlezo -I-PPC ibandakanya ngaphezulu kwamagama aphambili, ikwa malunga nokwenza imiyalezo yokuThumela imiyalezo ukukhuthaza ukucofa kunye nokuyilwa kwephepha ukuze uguqule uguquko. Sebenzisa iiNtengiso zePPC ezisebenza ngokugqibeleleyo njengenxalenye yeenkcazo zeemeta ezikwiSayithi ze-SEO kufuneka zonyuse ukucofa kwendalo. Ukuqonda okuvela kumaphepha okufika kwe-PPC kunokunyusa kakhulu ukuguqulwa kwendawo yonke.
Ukuphucula iziphumo eziPheleleyo Yonke into ekuthengisweni kweinjini yokukhangela iqala ngophando lwamagama aphambili. Ukukhetha igama eliphambili elijolise kwi-SEO ngokwenene ngumdlalo wokuqikelela ofundileyo. Ngaphaya koko, inqanaba lezinto eziphilayo alenzeki ngobusuku obunye kwaye ukulinganisa impumelelo yamagama aphambili ekujoliswe kuwo kwe-SEO kuthatha ixesha. I-PPC kulula kakhulu ukuyiphumeza kwaye ikhawuleze ukufumana idatha enokwenzeka. Sebenzisa i-PPC ukuvavanya ukuba ingaba igama eliphambili alisebenzi ndleko ngaphambi kwethoni yexesha kunye nezixhobo zisetyenziselwa ukwenza iphulo le-SEO elinokuthi okanye lingenakho ukuvelisa ingeniso.
Kwindawo yanamhlanje eguqukayo yokukhangela kwi-Intanethi, ishishini kufuneka liqwalasele ngamandla isicwangciso sentengiso sokudibanisa esidibeneyo sokudityaniswa kwe-PPC kunye neenzame ze-SEO ukufezekisa imbuyekezo ephezulu kutyalo-mali.
tags: uphando lwezinto eziphilayoukukhangela okuhlawulelweyoHlawula ngokucofa kanyePPCUphando lwezoPhandoSEOintlola
Ngaba uthumela bani i-imeyile?
Mar 1, 2011 ngo 4:22 PM
Ingcebiso enkulu, i-PPC inokuxhamla kwi-SEO njengoko usitsho ngakumbi kumagama aphambili ophando.
Mar 26, 2014 ngo 10:31 PM
Ukuhambelana kwegama eliphambili lelinye lamaqhosha okuphumelela ngeGoogle AdWords. Ngelixa kunokuba kukuhenda ukubandakanya zonke iintlobo zamagama aphambili onokufumana kuzo izandla, yazi ukuba le ihlala iyimpazamo # 1 yabathengisi xa besenza umkhankaso wabo wokuqala. Ufuna kuphela amathemba athi "Bayakudinga ngoku" kwaye baya kukhuthazeka ukuba banxibelelane nenkampani yakho, okanye bathenge iinkonzo zakho ukuba bacofa intengiso yakho. Abantu banikezela ngamagama aphosakeleyo ngalo lonke ixesha kwaye ibonakalisa ixesha elikhulu. Inkampani yam ilahlekelwe ngumndilili we-0.67 yeedola ngokunqakraza kude kube ngu-Simon kwi-RDM (imeyile yakhe yile simon.b@resultsdriven.org) isincedile safumana amadada ethu ngokulandelelana nephulo kwaye ngoku lenza i- $ 2.19 ngokunqakraza kwi-avareji endaweni- ye- $ 0.67. Ukuba uthetha naye mxelele umhlobo wakho kaDean Jackson.